Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » ‘बस पल्टिएर मान्छे मर्‍यो भनेर बसमा आगो लगाउँदै हिँड्ने?’
‘बस पल्टिएर मान्छे मर्‍यो भनेर बसमा आगो लगाउँदै हिँड्ने?’
१७ माघ, काठमाडौं । सरकारले छाउगोठ भत्काएको भन्दै संसदमा विरोध भएको छ । जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद गजेन्द्र महतले छाउगोठको नाममा आफूहरुका घर भ’त्काएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिको मृत्यु भयो भन्दैमा घर भत्काउन पाइन्छ ? आठ जना मान्छेको एउटा होटलमा मृ त्यु भएको छ, होटल भत्का’उँदै हिँड्ने ? हजारौं मान्छेको बसमा मृ त्यु भएको छ, बस आगो लगाउँदै हिँड्ने ?’ छाउ गोठ भ त्काएर सरकारले नचाहिँदो काम गरेको उनले बताए ।
‘हिजो गोर्खाली सेनाको नाममा हाम्रा घर भत्काइयो, अहिले छाउ गोठको नाममा हाम्रो घर भ’त्का’उ’ने ? के हेरेर बस्या छ गृहमन्त्रालय ? काम पा’छैन यसले ?’ उनले प्रश्न गरे ।
छाउगोठ भत्काउनु भन्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता रो क्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । ‘जिल्लामा नुन बेचिएको छ, औषधि बेचिएको छ, त्यत्रो भ्रष्टाचार छ, उनीहरुलाई सम्हाल्नु छैन,’ सांसद महतले भने, ‘पुलको बेहाल छ, बाटोको बेहाल छ, ठेकदार कहाँ छ कहाँ छ थाहा छैन, तिनलाई का र बा ही गर्नुपर्दैन ? स्कुलको अवस्था केछ, हस्पिटलको अवस्था केछ ? त्यो हेर्नुपर्दैन ?’
पश्चिम नेपालका कतिपय जिल्लाहरुमा महिना वारी भएका महिलाहरुलाई छाउगोठमा राख्ने चलन छ । छाउगोठमा बसेकै अवस्थामा कतिपयको मृ त्यु हुन थालेपछि सरकारले छाउ गोठ भत्काउने अभियान चलाएको छ । स्थानीय प्रहरी प्रशासनले छाउ गोठ भ’त्काए पनि स्थानीयले फेरि पुन र्निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति January 31, 2020